DVDStyler: Barnaamij bilaash ah oo iskutallaab ku dhisan oo loogu talagalay abuurista DVD iyo qorista | Laga soo bilaabo Linux
Macno malahan Nidaamka hawlgalka waan isticmaalnaa, dhammaantood waxaan rabnay ama aan u baahannay samee DVD xirfad-raadis ah, taasi waa, oo leh daboolka iyo liiska, waxyaabaha kale iyo / ama tas-hiilaadka kale. Sidaa darteed, markan waxaan dib u eegi doonnaa DVDStyler.
DVDStyler waa codsi bilaash ah oo qaab isweydiin leh Abuuritaanka DVD iyo qoraalka. Taas oo noo ogolaaneysa inaan si fudud ku abuurno DVD taas muuqaal xirfad leh taasi badanaa waa loo baahan yahay.
DVDStyler waa codsi horumarkiisa la joojiyo, taasi waa, iyada nooca xasilloon ee ugu dambeeyay ayaa lagu daabacay 19 / 05 / 2019. Laakiin weli waa nooc deggan, bisil (hufan / shaqeynaya) oo laga heli karo inta badan bakhaarrada GNU / Linux Distros. Taasina waa sababta aan loogu diidi karin inay tahay codsi waxtar u leh qof walba.
Tusaale kale oo ah degenaansho laakiin codsi duug ah oo weli ku habboon baahida ayaa ah DVDisaster, oo aan horay uga faallaynay, sanado badan kahor. Sidaa darteed, waxaan ku martiqaadaynaa kuwa xiiseynaya inay arkaan daabicitaankeenii hore oo la xiriira DVDisaster ama si toos ah ugala xiriir websaydhkaaga Sourceforge, taas oo wali jirta.
"DVDisaster-ku waa aalad loogu talagalay inay ka soo kabato xogta dirawallada indhaha, ha ahaadaan CD-yo, DVD-yo ama Blu-Rays. Kaliya maahan inay noo ogolaato inaan la soo baxno macluumaadka, waxaan sidoo kale hubin karnaa xaalada saxannada, iyadoo la adeegsanayo jaantus faahfaahinaya xaaladooda." Ka soo kabso xogta CD-yadaada ama DVD-yadaada Dvdisaster
Ka soo kabso xogta CD-yadaada ama DVD-yadaada Dvdisaster
1 DVDStyler: App bilaash ah oo isku dhufasho badan
1.1 Waa maxay DVDStyler?
1.2 Macluumaadka la xiriira
DVDStyler: App bilaash ah oo isku dhufasho badan
Waa maxay DVDStyler?
Sidaad sheegtay degel rasmi ah, waxaa lagu tilmaamay sida soo socota:
"DVDStyler waa codsi wax ku qora DVD oo bilaash ah, iskutallaab-madal ah kaas oo awood u siinaya kuwa jecel fiidiyowga inay abuuraan DVD-yo xirfad-yaqaan ah. Waa barnaamij bilaash ah oo lagu qaybiyay GNU General License (GPL)."
Sidaa awgeed, leh DVDStyler waxaan si fudud uga gubi faylasha fiidiyowga DVD loo maqli karo fudud oo dhakhso leh DVD ciyaaryahan kasta ilaa abuuro menus DVD qaas ah dhadhaminteena oo aan u baahannahay in aan maamulno waxyaabaha la duubay.
Way fududahay in la isticmaalo oo waxay la timaadaa qalab fudud iyo astaamo horumarsan.
Waxaa loo isticmaali karaa si loo abuuro loona gubo fiidiyowyada DVD-ga leh menu is-dhexgal shakhsi ah.
Kuu ogolaanayaa abuurista menus-eegis DVD, badhamada iyo shaqooyinka. Intaa waxaa sii dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad habeyso socodka iyo xajmiga batoon kasta ama shay garaaf ah oo la geliyay menusyada la abuuray.
Waxay taageertaa ku dhowaad dhammaan fiidiyowyada waaweyn iyo koodhka codka si loo abuuro loona qoro faylal kasta. Gaar ahaan, waxay ku habboon tahay AVI, MOV, MP4, MPEG, OGG, qaababka WMV, iyo kuwo kale. Waxay sidoo kale bixisaa taageero AC-3, DivX, Xvid, MP2, MP3, MPEG-2, MPEG-4, iyo maqal iyo muuqaal kale.
Waxay leedahay taageerada processor-yada badan. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku qoran tahay C / C ++ waxayna isticmaashaa aaladda wax lagu sawiro ee loo yaqaan 'wxWidgets graphic toolkit' taasoo ka dhigaysa mid madax bannaan. Sababta sababta, waa isku dhufashada (GNU / Linux, Microsoft Windows iyo MacOS).
Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad ka heli kartaa bogga rasmiga ah ee DVDStyler en Sourceforge. In kasta oo, si gaar ah loo barto sida loo isticmaalo, waad heli kartaa barashada rasmiga ah ee Isbaanishka gujinaya soo socda isku xirka.
Qaar ka mid ah codsiyada bilaashka ah iyo kuwa furan waxay noqon karaan:
Fur DVD Soo saare
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «DVDStyler», Codsi xiiso leh oo wali bilaash ah oo iskudhaf ah oo loo adeegsado maaraynta abuurista iyo qorista DVD-yadayada; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » DVDStyler: App bilaash ah oo isku dhufasho badan leh oo loogu talagalay abuurista iyo qoraalka DVD
Waxay umuuqataa mid aad ufiican. Dhowr sano ka hor aniga wey ila fiicnaan laheyd, laakiin maalmahan wax aad u yar ayaan ka duubaa DVD / Blu-Ray. Wali isha ayaa lagu hayn doonaa. Waad ku mahadsantahay maqaalka iyo talo soo jeedinta.
Hagaag, looma baahna in wax laga qoro CD / DVD / BluRay, maaddaama codsigan uu ikhtiyaar u leeyahay inuu badbaadiyo wixii lagu sameeyay qaab .iso; Kani waa midka aan u diro macaamiishayda markay ii soo diraan si aan u miisaamo sawirro iyo fiidiyowyo si looga daawado kombuyuutarradooda (iyo horeba DVD-yada).
Salaan, willalfangom. Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga iyo ka qayb qaadashada mawduuca.
Waad salaaman tihiin, eJoagoz. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga waxaanan ku faraxsanahay inaad ka heshay barnaamijka ka faalloodka ah.
Weerarka ku tiirsanaanta wuxuu u oggolaanayaa fulinta koodhka PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber iyo 30 shirkado kale